92 arday oo dhamaysatay xirfadaha farsamada-gacanta oo shahaado iyo qalab ay ku shaqaystaan lagu gudoonsiiyay Boosaaso. – Radio Daljir
92 arday oo dhamaysatay xirfadaha farsamada-gacanta oo shahaado iyo qalab ay ku shaqaystaan lagu gudoonsiiyay Boosaaso.
Bosaso,Jan 29 -Arday dhamaysatay barashada xirfadaha farsamooyin gacanta ayaa maanta shahaado iyo qalab kale duwan oo ay ku howlgalaan waxaa lagu gudoonsiiyay magaalada Boosaaso.
Munaasbad balaaran oo ka dhacday xarunta dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu faahfaahiyay muhiimadda ay xirfadaha farsamadooyinka gacanta ay uleeyihiin qaybaha kale duwan ee bulshada.
Maxamed Jaamac Shibiin oo ka mid ah hay’adda DRC oo maalgalisay tababarkan ayaa waxaa uu sheegay xafladdan in loo qabtay 92-arday oo dhamaysatay barashada farsamooyinka gacanta sida harqaanka,tubaystaha iyo cilad bixinta moobilada,isagoona intaasi raaciyay tababarka inuu socday muddo lix bilood ah.
92-Arday ee dhamaysatay barshada farsmooyinka gacanta ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho,waxaana goobta xafladda ay ka socotay lagu gudoonsiiyay agab kale duwan oo ay ku shaqaystaan.